Ufeze iphupho ethola igolide | Isolezwe
Ufeze iphupho ethola igolide
ezemidlalo / 11 April 2018, 12:57pm / ZWELAKHE NGCOBO
UCASTER Semenya ejabula ngemuva kokudla ubhedu ku-1500m izolo ntambama kumaCommmonwealth Games abanjelwe eGold Coast e-Australia Isithombe: EPA-EFE
EFULATHELA iNingizimu Afrika uCaster Semenya wakusho kwagcwala umlomo ukuthi isifiso sakhe wukuyoshanela izindondo zegolide kumaCommonwealth Games abeyibamba kuwo okokuqala ngqa selokhu aqala ukugijima.
Izolo lo mgijimi odabuka eLimpopo nohlale engcofwa ngobulili bakhe wenze umsebenzi oncomekayo ethola indondo yegolide kwi-1500m. USemenya uqophe u-4:00:71 okuyisikhathi sakhe esisha nesihamba phambili uma siqhathaniswa nasiqopha kwi-IAAF World Championships abeseLondon ngonyaka odlule.
Ngo-2016 kwi-African Championships eKings Park Athletics Stadium uSemenya waqopha u-4:01.99 okwakuyisikhathi esasingcono kunayesiqophe eminyakeni eyisikhombisa edlule.
Lokhu kwaholela ekutheni ehluleke ukwephula u-4:01.81 owawuqoshwe uZola Budd ngo-1984, okuyirekhodi aliphulile izolo.
Ukuthola kwakhe igolide kulo mqhudelwano kumfake emlandweni kwazise akekho umgijimi odabuka eNingizimu Afrika oseke washanela amagolide kuyo yonke imiqhudelwano yomhlaba, okungama-Olympic, ama-World Championship namaCommonwealth Games.
Lo mgijimi owazakhela ukuhlonipheka enqoba indondo yegolide kwi-800m kuma-IAAF World Championships ayeseBerlin, eGermany ngo-2009 ulandelwe uBeatrice Chepkoech waseKenya noMelissa Courtney waseWales oshwebise umgijimi wase- Australia uLinden Hall ukuthi athole indondo yethusi.
Inselelo kaSemenya owanqoba igolide ku-800m kuma-Olympic ngo-2016 eBrazil, sekuwukuthi adle ubhedu kuleli banga owamanqamu alo angoLwesihlanu.
Ukunqoba kwakhe kufanele ukuthi sekumbekisele ithikithi lokuyomela elakuleli kwiWorld Cup okuzobe kuqhudelana kuyo amazwe ayisishayagalombili eLondon Stadium ngoJulayi 14-15.
Le ntokazi inqoba nje ngoMsombuluko abagijimi bakuleli u-Akani Simbine noHenricho Bruintjies bangene belandelana kwi-100m akade kukhona kuwo ingwazi yaseJamaica uYohan Blake.
UBlake ungene enenselelo yokuthi abhale kabusha umlando waseJamaica emabangeni amafishane obese kunesikhathi kukhonya u-Usain Bolt othathe umhlalaphansi ngemuva kwamaWorld Championship nyakenye.
Impumelelo yabagijimi bakuleli ingehlukile kakhulu uma iqhathaniswa nokwenza eGlasgow, eScotland ngo-2014. UKhotso Mokoena kuphela owaphumelela ukuthola indondo yegolide kwi-triple Jump.
U-Anaso Jobodwana noClarence Munyai banethuba lokusandisa isibalo uma bephumelela ukungena kowomanqamu ka-200m akusasa. Namuhla ntambama uLuvo Manyonga noRuswahl Samaai bazodlala kowomanqamu e-log jump.